Lalisee – Beekan Guluma Erena
Lalisee	Beekan Erena
Personal Category March 23, 2016April 1, 2016	0 Comment
Lalisee Mokonnon eenyu? Maqaan koo guutuun Lalisee Mokonnin Dinqaan jedhama. Abbaa koo obbo Mokonnin Dinqaafi harmee koo Aadde Ijjigaayyoo kabbadaarraa Hagayya 3, 1994 A.L.A ‘tti godina Wallagga bahaa, aanaa Nuunnuu Qumbaattin dhaladhe. Akkuma daa’ima hedduu biyyoo daakee, dhoqqeerra gangaladhee taphadheen guddadhe. umuriin koo barnootaaf yoo ga’u achuma aanaa nuunnuu qumbaattin oolmaa daa’immanii seene. Harmeen koo hojjettuu mootummaa waan taateef hojiif yeroo isheen jijjiiramtu anis mana barnootaa jijijjiiraan baradhe. Kutaa 1ffaa fi 2ffaa mana barumsaa Nuunnuu gabaa roobiittan baradhe. Kutaa 3-5ffaatti magaalaa naqamteetti mana barumsaa Abdii borii, kutaa 6ffaa mana barumsaa kaatolik kidaane miratii naqamteetti, sanaan boodas gara Aanaa nuunnuu qumbaatti deebi ‘un mana barumsaa Nuunnuu gabaa roobiitti kutaa 7 fi 8, mana barumsaa sadarkaa 2ffaa nuunnuutti ammoo kutaa 9ffaan baradhe. kutaa 10ffaa mana barnootaa ASK naqamteetti, kutaa 11 fi 12 mana barumsaa qophaa’ina Naqamteettin xumure. Ijoollummaa koo kaasee aadaa fi dudhaa seenaa koo maatii, naannoo fi mana barnootaatti baraan guddadhe. Keessumaa afoola oromoo hedduu ijoollummaa kootti taphachaan guddadhe. Galgala galgala abidda qarqara taa’ee hin ta’in malee maashoo(faanosii) qabsiifannee abbaan keenya hibboo fi abboonteen nu taphachiiseera. carraa horii eeguu hin arganne; ta’us tapha tikeen taphattu ijoollummaa kootti obbolaa koo wajjin taphadheera.
” Koyyee koyye baloo
ijoollee goodaa sanaa koyye baloo
kottaa hora buunaa koyye baloo
anoo irbaata hin nyaannee koyye baloo
maaliif nyaachuu diddee koyye baloo
warratu na dhowwatee koyye baloo
maaliif dhaanuu didde koyye baloo
dhaanee dhaaneen dadhabee koyye baloo…….” jechaa wal harkaa fuunee nama lamaan taphanna turre. Aartiin dhugaadha. Dhugaa hawaasa keessa jiru. Kanaaf ta’uu hin oolu ijoollummaa koo kaasee quuqqaan saba koo na quuqa. Dhiitamuu saba koo kulkulfachaa, caba oromoo dhidhiibbachaan guddadhe. Miira natti dhaga’amu kobbee kootiin waraqaatti himachaa, imimmaan koo jechaan haqee, caba koo jechaan dhidhiibee, isa qeeqamus barreeffamaan; isa jejamus barreeffamaan ibsuu hedduun jaalladha. Asoosamoota gaggabaaboo, afoola oromoo, walaloo fi seenaa barreessuun addunyaan keessa jiraadhun kataba. Barreessitoota Oromoo keessaa tokko ta’uun abjuu koo ganamaati. Aartii Oromoo fuulduratti tarkaanfachiisuun barbaada. Afaan saba guddaa guddaadha! Kanaaf guddatee latee arguun abjuu koo isa guddaadha. Yeroo ammaa kana kitaaba kuusaa walaloo “IMIMMAAN IMAANAA” jettu maxxansiisuuf adeemsa jalqabeera. Hayyuu keenya Beekan Gulummaatiin gulaalamaa jira. Fuuldurattis afoola Oromoo dagatamaa jiran suuqa keessaa baasee akka barraaqa barii ibsuuf itti gaafatamummaa koo ba’uun fedha. Ammas gaaffiin saba koo gaaffii kooti, cabni obbolaa koo na okkolchiisa, inni saba guddaa quuqu anaafis qoraattii onnee madeessudha. Anaaf kobbeen meeshaa waraanaati. Meeshaa dhugaa jiru addunyaaf ibsu. Kanaaf har’as, boris nan barreessa. Kobbee qofaan miti, guyyaanitti giimii na keessaa banbanu bakakkaatti jijjiiree diinarratti roobsus fagoo miti. Gaafa bokkaa hamaan roobee, balaqqeessi balaqqeessa’u; bakakkaa roobeen saba koorraa isa godaanuu malu saba koo wajjinan godaansa. Hamma sitti hurka ol ba’ee bokkaa ta’u qindeessuuf suuta osoon hin sokoksin galaanarran joora. Dabalataan yuuniversiitii Hawaasaatti barattuu “electrical engineering’n” ture. Bu’aa bayiin jireenyaa hedduudha. Sababoota garaa garaan itti fufuu hin dandeenye. Amma garuu yuuniversiitii riifti vaalii damee naqamteetti “Accounting” barachaan jira. Abjuun koo, mul’ati koo hedduudha. Gaaf tokko ijaan arguuf har’a adeemsa jalqabeera!
LALISEE MOKONNIN DINQAA Qunnamuuf
About Latest Posts Beekan ErenaTeaching, Writing and editing at Books Latest posts by Beekan Erena (see all)	GUUBOO AFAAN OROMOO:Barattoota Yunibarsitii Jimmaa Hojii bareedaatti jiran! - April 21, 2017	DIINQA OROMOO: Dhimma Dubartootaa: Aadde Dinqinash Dheeressaa Kitilaa fi Beekan Gulummaa Irranaa’ Kutaa 1ffaa - April 21, 2017	FAYYISAA LEELLISAA: Walaloon Ajaa’ibaa Shamarree Oromootiin: Aartii jabaa!! - April 21, 2017	Kana Tamsaasi:TweetEmailPrint
Jiraa Lubbuu Dhabe →
Posts	GUUBOO AFAAN OROMOO:Barattoota Yunibarsitii Jimmaa Hojii bareedaatti jiran!
FAYYISAA LEELLISAA: Walaloon Ajaa’ibaa Shamarree Oromootiin: Aartii jabaa!!
Barreessitootaafi Dararaa/Writers and Risk:Harvard University’ Keessatti Marii bareedaa Taasifame; Ebla, 2017
DIINQA OROMOO Monenus Hundarraa Galataa faana 2017
Biyya Oromoo Keessatti Biyya Biraa Ijaarun Itti Fufe! Baarentuu Gadaa Irraa//
DIINQA OROMOO Kutaa 13ffaa-Jaarmiyaa Liigii Mirga Dhala namaa Gaaromaa Waakasaa kutaa 1ffaa
DIINQA OROMOO Marsaa 16 ffaa-Kutaa 2ffaa-Gaaromaa Waaqasaa fi Beekan Gulummaa Irranaa-”GAAF TOKKO” Kitaaba Asoosama Haaraa Bara 2017
Politics Category (309)
CommentsMagarsa Nagasaa on IJIBBAATAHAFTEE LAMMII on Kitaabota Afaan OromooQAAMONNI MAQAA SHANEE JEDHU KANAAN HIRRIBA DHABAN KUNNEEN SHAN MARAACHUFI SHAN MARAATANII TURANII? – Faajjii Dhugaasaa, Yuunibarsiitii Haroomayaa irraa! | abdisatato on Asoosama Gabaabaa- Barreessaan: Hamzaa Jemal Mohammedmdasir on Asoosama Gabaabaa- Barreessaan: Hamzaa Jemal MohammedAnonymous on OROMUMMAA FI HABASHAA!-Seenessoo Gabaabaa-Beekan Gulummaa Irranaa’ti	Recent Posts	GUUBOO AFAAN OROMOO:Barattoota Yunibarsitii Jimmaa Hojii bareedaatti jiran!